ကိုဗဈဖွဈပွီးပွီ….လူကကောငျးမလာသေးရငျ….ဒါတှလေုပျကွညျ့ပါ – Nyi Ma Lay
1. အားမရှိဘူး ၊ နုံးနတေယျ၊ မလှုပျခငျြဘူး😓 2. အသကျရှူရခကျတယျ၊ နညျးနညျး လှုပျတာနဲ့ မောတယျ😥😥 3. ရငျကွပျတယျ သလိပျထှကျတယျ😪 4. ခြောငျးဆိုးတယျ (အေးရငျ ပိုဆိုးတယျ)🗣🗣🗣
5. အစားမစားခငျြဘူး ၊ အစာဝငျရငျ ပြို့တယျ အနျတယျ🤢🤢🤢 6. ခေါငျးကိုကျတယျ😰 7. ဘာလုပျလုပျ အာရုံမလာဘူး (စိတျမဝငျစားဘူး) 8. စိတျဖိစီးမှုမြားတယျ၊ ကွောကျတယျ လနျ့နတေတျတယျ 9. ည အိပျမပြျောဘူး
နမေကောငျးတုနျး အစားဘယျလောကျပဲ စားတယျပွောပွော ကောငျးနစေဉျကလောကျ မစားနိုငျပါဘူး၊ Virus အသဈကို သတျဖို့အတှကျ ကိုယျခံအားက အစှမျးကုနျထုတျပွီး တိုကျထားရတဲ့အတှကျ #ခရီးအဝေးကွီးကိုပွေးထားရတဲ့_မာရသှနျအပွေးသမား လို ပငျပနျးနှမျးနယျပွီး အားမရှိဖွဈကာ နညျးနညျးလှုပျ လိုကျတာနဲ့ မောနရေတာပါ။
– ပုံမှနျအတိုငျး အစာပွနျစားပါ (ထမငျး၊ အသား/ငါး၊ အဆီ၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ၊ အသီးအနှံမြှတအောငျစားပါ)
– ရမြေားမြားသောကျပါ (ရနှေေးဖွဈဖွဈ၊ ရအေေးဖွဈဖွဈရပါတယျ)
– ခြှေးထှကျမြားပါက (သှေးတိုးမရှိပါက ဓာတျဆားရညျသောကျပါ)
– အားဆေးဆိုသညျ့ Multivitamins မြားကို အရမျးကွီးအားမကိုးကွပါနဲ့ (Multivitamins တှဟော => ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှနေဲ့ တူတူပဲမို့ အားဆေးလို့ချေါပမေယျ့ အားရှိစတေဲ့ဆေး မဟုတျပါဘူး)
2. အသကျရှူရခကျတယျ၊ နညျးနညျး လှုပျတာနဲ့ မောတယျ
Virus ဟာ အဆုတျကို အဓိက ဖကျြဆီးတာဖွဈလို့ လူတိုငျးမှာ အနညျး နဲ့ အမြားတော့ အဆုတျက ဒဏျဖွဈပါတယျ SpO2 ကခြဲ့တဲ့ လူနာတှကေ ဒဏျရာပိုပွီးကွီးပါတယျ ၊ ရောဂါ သကျသာလာပွီး SpO2 ပွနျတကျလာပမေယျ့
👉 ဒဏျရာတှကေို ကုစားဖို့ အခြိနျယူရပါသေးတယျ 👉 ဒဏျရာတှေ ပို မဆိုးလာစဖေို့လညျး ဂရုစိုကျရပါတယျ
– ဆေးလိပျ လုံးဝ (လုံးဝ) မသောကျပါနဲ့
– ပွငျးထနျတဲ့လှုပျရှားမှုတှေ မလုပျပါနဲ့
– အသကျရှူလကေ့ငျြ့ခနျး မှနျမှနျလုပျပါ
3. ရငျကွပျတယျ သလိပျထှကျတယျ
ရောဂါပွငျးထနျတုနျးက ထှကျထားပွီး ခဲနတေဲ့ ခြှဲသလိပျတှေ ပွနျပြျောနတော ဖွဈလို့ သလိပျထှကျပါတယျ၊
– Position ခဏခဏ ပွောငျးပေးခွငျး
– ကြောကုနျးကို ပုတျပေးခွငျး
– ရနှေေးငှရှေူ့ပေးခွငျး (ခဏပဲလုပျပါ အလှနျအကြှံမလုပျပါနဲ့ ရပေူငှတှေ့ကေ အသကျရှူလမျးကွောငျးကို အပူလောငျစပွေီး ပွနျပွီးရောငျစနေိုငျပါတယျ) သလိပျစှနျ့ပဈမှုကလညျး အလှနျ အရေးကွီးပါတယျ (တပါးသူမြားကို ကူးစကျမှုမရှိအောငျ အထူးဂရုစိုကျပွီး စှနျ့ပဈဖို့လိုပါတယျ)
အဆုတျကရောငျထားတော့ လပွှေနျလေးတှေ ကဉျြးသှားတဲ့အတှကျ ရှူတဲ့လကေအေးပွီး ခွောကျသှတေဲ့အခါ၊ လှဲအိပျတဲ့အခါ လညျခြောငျးယားပွီး ခြောငျးဆိုးပါတယျ
– နှေးနှေးထှေးထှေးနပေါ (စှပျကယျြဂြိုငျးပွတျ၊ လကျပွတျ၊ ဘောငျးဘီတို ထကျစာရငျ T-shirt, ဘောငျးဘီရှညျနှငျ့နပေါ)
– ရနှေေးသောကျပေးပါ (ခြောငျးဆိုးခငျြလာလြှငျ ရနှေေးကို နညျးနညျး နညျးနညျး ခဏ ခဏ သောကျပေးပါ)
– ဆားရညျ + ရနှေေးဖွငျ့ပါးလုတျကငျြးပါ (ပါးလုတျကငျြးတာ မြိုခတြာမဟုတျလို့ သှေးမတိုးပါဘူး) ဆားရညျမသုံးခငျြလြှငျ (ပိုကျဆံပေါလြှငျ) Betadine mouthwash သုံးပါ
– ငုံဆေးလေးငုံထားပါ (Lozenges – အဆငျပွရော/ဝယျလို့ရတာ ငုံလို့ရပါတယျ)
– မသကျသာရငျ သောကျနကြေ ခြောငျးဆိုးပြောကျဆေး သောကျပါ။
5. အစားမစားခငျြဘူး၊ အစာဝငျရငျ ပြို့တယျ
သာမနျနကေောငျးကာစ နလနျထ လူနာတှဟော ဖြားနာတုနျးက ကုနျဆုံးသှားတဲ့ စှမျးအငျတှေ ဖွညျ့ဖို့အတှကျ အစားမြားမြားပွနျစားကွပါတယျ၊ (နကေောငျးတာနဲ့ စားခငျြသောကျခငျြစိတျ တိုးလာတယျပေါ့) ကိုဗဈလူနာတှကွေတော့
👉 နောကျဆကျတှဲအနေ နဲ့ အနံ့ပြောကျတာ၊ အရသာပကျြတာတှကွေောငျ့ (အာရုံ နှဈပါးခြို့တဲ့ပွီး) စားခငျြသောကျခငျြစိတျ မရှိကွပါဘူး၊
👉 တခြို့ ရောဂါပွငျးပွငျးထနျထနျ ခံစားလိုကျရတဲ့ လူတှမှော ရောဂါခံစားရစဉျ အစာစားလညျး မောတဲ့အတှကျ ရောဂါသကျသာလာလညျး အစာစားရမှာ ကွောကျနတေတျကွပါတယျ။
👉 Virus နဲ့ ကိုယျခံအား တိုကျပှဲကွီးဖွဈတော့ ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံး ရောငျရမျးမှုတှဖွေဈတဲ့အတှကျ အစာအိမျနှငျ့အူလမျးကွောငျးပါ ထိခိုကျမိရငျ အစာအိမျအနာအခံရှိသူတှေ ရောဂါပွနျကွှတတျပါတယျ
👉 အူက ကောငျးကောငျး မလှုပျတဲ့အခါ (Gastric emptying ကွာတဲ့အတှကျ) စားလိုကျတာနဲ့ ရငျပွညျ့ပွီး အနျခငျြတာပါ။
– မစားခငျြလညျး၊ အရသာမရှိလညျး ကွိုးစားပွီး စားကွပါ။
– အမြားကွီး မစားပဲ နညျးနညျးနဲ့ ခဏခဏ စားပါ
– ဘယျလိုမှ ကိုမရဘူး နညျးနညျးဝငျတာနဲ့ကို ပြို့လာတယျ၊ အနျပါတယျ ဆိုတဲ့ သူမြားကတော့ (Motilium M (သို့မဟုတျ) Maxalon ဆိုတဲ့ဆေးကို မနကျစာ၊နလေ့ညျစာ၊ ညစာ မစားမီ မိနဈ (၃၀) ကွိုသောကျပါ။
👌 အရသာမရတာဟာ လြှာပျေါမှာရှိတဲ့ အရသာခံတဲ့ အဖုလေးတှေ ခတ်ေတခဏ အလုပျမလုပျနိုငျတာဖွဈပွီး သူ့အလိုလိုပွနျကောငျးပါတယျ #အရသာမရဘူး (ပှငျ့ထှကျသှားအောငျ ဆိုပွီး) အရသာပွငျးလှနျးတဲ့ ခဉျြလှနျး စပျလှနျး ပူလှနျးတဲ့ အစားမြား ကို မစားကွပါနှငျ့
တကယျပှငျ့ထှကျသှားမှာက အစာအိမျပါ 😰 ပါးစပျကသာ အရသာမရတာ စားတဲ့ဟာတှရေဲ့ ဒဏျကို ကနျြးမာရေးသိပျမကောငျးတဲ့အစာအိမျက ခံရပွီး အစာအိမျပေါကျသှားပါလိမျ့မယျ
6. ခေါငျးကိုကျတယျ ၊ (7) ဘာလုပျလုပျ အာရုံမလာဘူး (စိတျမဝငျစားဘူး) ၊ (8)စိတျဖိစီးမှုမြားတယျ၊ ကွောကျတယျ လနျ့နတေတျတယျ၊ (9) ည အိပျမပြျောဘူး
ကနျြတဲ့ အခကျြတှကေတော့ စိတျနဲ့ပဲ ဆိုငျတာပါ။
ကြှနျတျော စာတဈပုဒျရေးဖူးပါတယျ (Pandemic stress reactions ) ကပျရောဂါကို အကွောကျကွီးကွောကျနရောက ကိုယျ့မှာဖွဈလိုကျရတဲ့ အခါ အကွောကျကွီးကွောကျသှားတဲ့အတှကျ
👉 ပွနျဖွဈရငျ ဘယျလိုဖွဈမှာလဲ
👉 ငါ့ ခန်ဓာကိုယျကွီးရော ဘယျလောကျပကျြစီးသှားပွီလဲ
👉 အပျေါက ပွောခဲ့တဲ့ လက်ခဏာတှခေံစားရတော့တကယျပွနျကောငျးတာရောဟုတျရဲ့လားစတဲ့ အတှေးတှနေဲ့က ညအိပျမပြျောပဲ အထကျပါ (6,7,8,9) ကို ခံစားကွရပါတယျ။
– အဆိုးဆုံးအခွအေနကေို ကြျောဖွတျပွီးပွီ ကောငျးလာမှာပါ
– ခကျြခငျြးကွီး မကောငျးနိုငျပမေယျ့ တဖွညျးဖွညျး တိုးတကျလာပါလိမျ့မယျ
– Post-covid မှာ ဘာဖွဈတယျ ညာဖွဈတယျ ဆိုတဲ့ သတငျးတှဖေတျပွီး စိုးရိမျမနပေါနဲ့ (ကိုယျ့အလုပျကိုယျလုပျပါ 👉 နားနားနနေေ နေ၊ အသကျရှူလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျ၊ အစားဝငျအောငျစား၊ အိပျပြျောအောငျအိပျ
– ဖွဈနိုငျတယျ ဒါပမေယျ့ ရှားတယျလေ (တဈကမ်ဘာလုံးမှာ တဈယောကျလောကျတှလေ့ညျး) ဆောငျးပါးရေးတော့ (လူကိုခှေးက ကိုကျတာ သတငျးမဟုတျပမေယျ့ ခှေးကိုလူကသှားကိုကျတာရေးတော့) နာမညျကွီးတာပေါ့
– အိပျပြျောရငျ အားလုံးသကျသာလာပါလိမျ့မယျ
– ဘယျလိုမှ အိပျမရရငျတော့ Melatonin 3mg သောကျအိပျပါ။ (Melatonin နဲ့မရရငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ဆှေးနှေးပွီး စိတျငွိမျဆေးသာသောကျပါ)
သကျရှညျကနျြးမာ စိတျခမျြးသာကွပါစေ #ရောဂါအန်တာရယျအပေါငျးမှာ့ကငျးဝေးကွပါစေ credit~Dr.phone si thu lwin
1. အားမရှိဘူး ၊ နုံးနေတယ်၊ မလှုပ်ချင်ဘူး😓 2. အသက်ရှူရခက်တယ်၊ နည်းနည်း လှုပ်တာနဲ့ မောတယ်😥😥 3. ရင်ကြပ်တယ် သလိပ်ထွက်တယ်😪 4. ချောင်းဆိုးတယ် (အေးရင် ပိုဆိုးတယ်)🗣🗣🗣
5. အစားမစားချင်ဘူး ၊ အစာဝင်ရင် ပျို့တယ် အန်တယ်🤢🤢🤢 6. ခေါင်းကိုက်တယ်😰 7. ဘာလုပ်လုပ် အာရုံမလာဘူး (စိတ်မဝင်စားဘူး) 8. စိတ်ဖိစီးမှုများတယ်၊ ကြောက်တယ် လန့်နေတတ်တယ် 9. ည အိပ်မပျော်ဘူး
နေမကောင်းတုန်း အစားဘယ်လောက်ပဲ စားတယ်ပြောပြော ကောင်းနေစဉ်ကလောက် မစားနိုင်ပါဘူး၊ Virus အသစ်ကို သတ်ဖို့အတွက် ကိုယ်ခံအားက အစွမ်းကုန်ထုတ်ပြီး တိုက်ထားရတဲ့အတွက် #ခရီးအဝေးကြီးကိုပြေးထားရတဲ့_မာရသွန်အပြေးသမား လို ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး အားမရှိဖြစ်ကာ နည်းနည်းလှုပ် လိုက်တာနဲ့ မောနေရတာပါ။
– ပုံမှန်အတိုင်း အစာပြန်စားပါ (ထမင်း၊ အသား/ငါး၊ အဆီ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသီးအနှံမျှတအောင်စားပါ)
– ရေများများသောက်ပါ (ရေနွေးဖြစ်ဖြစ်၊ ရေအေးဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်)
– ချွေးထွက်များပါက (သွေးတိုးမရှိပါက ဓာတ်ဆားရည်သောက်ပါ)
– အားဆေးဆိုသည့် Multivitamins များကို အရမ်းကြီးအားမကိုးကြပါနဲ့ (Multivitamins တွေဟာ => ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ တူတူပဲမို့ အားဆေးလို့ခေါ်ပေမယ့် အားရှိစေတဲ့ဆေး မဟုတ်ပါဘူး)
2. အသက်ရှူရခက်တယ်၊ နည်းနည်း လှုပ်တာနဲ့ မောတယ်
Virus ဟာ အဆုတ်ကို အဓိက ဖျက်ဆီးတာဖြစ်လို့ လူတိုင်းမှာ အနည်း နဲ့ အများတော့ အဆုတ်က ဒဏ်ဖြစ်ပါတယ် SpO2 ကျခဲ့တဲ့ လူနာတွေက ဒဏ်ရာပိုပြီးကြီးပါတယ် ၊ ရောဂါ သက်သာလာပြီး SpO2 ပြန်တက်လာပေမယ့်
👉 ဒဏ်ရာတွေကို ကုစားဖို့ အချိန်ယူရပါသေးတယ် 👉 ဒဏ်ရာတွေ ပို မဆိုးလာစေဖို့လည်း ဂရုစိုက်ရပါတယ်
– ဆေးလိပ် လုံးဝ (လုံးဝ) မသောက်ပါနဲ့
– ပြင်းထန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ မလုပ်ပါနဲ့
– အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန်လုပ်ပါ
3. ရင်ကြပ်တယ် သလိပ်ထွက်တယ်
ရောဂါပြင်းထန်တုန်းက ထွက်ထားပြီး ခဲနေတဲ့ ချွဲသလိပ်တွေ ပြန်ပျော်နေတာ ဖြစ်လို့ သလိပ်ထွက်ပါတယ်၊
– Position ခဏခဏ ပြောင်းပေးခြင်း
– ကျောကုန်းကို ပုတ်ပေးခြင်း
– ရေနွေးငွေ့ရှူပေးခြင်း (ခဏပဲလုပ်ပါ အလွန်အကျွံမလုပ်ပါနဲ့ ရေပူငွေ့တွေက အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို အပူလောင်စေပြီး ပြန်ပြီးရောင်စေနိုင်ပါတယ်) သလိပ်စွန့်ပစ်မှုကလည်း အလွန် အရေးကြီးပါတယ် (တပါးသူများကို ကူးစက်မှုမရှိအောင် အထူးဂရုစိုက်ပြီး စွန့်ပစ်ဖို့လိုပါတယ်)
အဆုတ်ကရောင်ထားတော့ လေပြွန်လေးတွေ ကျဉ်းသွားတဲ့အတွက် ရှူတဲ့လေကအေးပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့အခါ၊ လှဲအိပ်တဲ့အခါ လည်ချောင်းယားပြီး ချောင်းဆိုးပါတယ်
– နွေးနွေးထွေးထွေးနေပါ (စွပ်ကျယ်ဂျိုင်းပြတ်၊ လက်ပြတ်၊ ဘောင်းဘီတို ထက်စာရင် T-shirt, ဘောင်းဘီရှည်နှင့်နေပါ)
– ရေနွေးသောက်ပေးပါ (ချောင်းဆိုးချင်လာလျှင် ရေနွေးကို နည်းနည်း နည်းနည်း ခဏ ခဏ သောက်ပေးပါ)
– ဆားရည် + ရေနွေးဖြင့်ပါးလုတ်ကျင်းပါ (ပါးလုတ်ကျင်းတာ မျိုချတာမဟုတ်လို့ သွေးမတိုးပါဘူး) ဆားရည်မသုံးချင်လျှင် (ပိုက်ဆံပေါလျှင်) Betadine mouthwash သုံးပါ
– ငုံဆေးလေးငုံထားပါ (Lozenges – အဆင်ပြေရာ/ဝယ်လို့ရတာ ငုံလို့ရပါတယ်)
– မသက်သာရင် သောက်နေကျ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး သောက်ပါ။
5. အစားမစားချင်ဘူး၊ အစာဝင်ရင် ပျို့တယ်
သာမန်နေကောင်းကာစ နလန်ထ လူနာတွေဟာ ဖျားနာတုန်းက ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ စွမ်းအင်တွေ ဖြည့်ဖို့အတွက် အစားများများပြန်စားကြပါတယ်၊ (နေကောင်းတာနဲ့ စားချင်သောက်ချင်စိတ် တိုးလာတယ်ပေါ့) ကိုဗစ်လူနာတွေကြတော့
👉 နောက်ဆက်တွဲအနေ နဲ့ အနံ့ပျောက်တာ၊ အရသာပျက်တာတွေကြောင့် (အာရုံ နှစ်ပါးချို့တဲ့ပြီး) စားချင်သောက်ချင်စိတ် မရှိကြပါဘူး၊
👉 တချို့ ရောဂါပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားလိုက်ရတဲ့ လူတွေမှာ ရောဂါခံစားရစဉ် အစာစားလည်း မောတဲ့အတွက် ရောဂါသက်သာလာလည်း အစာစားရမှာ ကြောက်နေတတ်ကြပါတယ်။
👉 Virus နဲ့ ကိုယ်ခံအား တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်တော့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ရောင်ရမ်းမှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းပါ ထိခိုက်မိရင် အစာအိမ်အနာအခံရှိသူတွေ ရောဂါပြန်ကြွတတ်ပါတယ်
👉 အူက ကောင်းကောင်း မလှုပ်တဲ့အခါ (Gastric emptying ကြာတဲ့အတွက်) စားလိုက်တာနဲ့ ရင်ပြည့်ပြီး အန်ချင်တာပါ။
– မစားချင်လည်း၊ အရသာမရှိလည်း ကြိုးစားပြီး စားကြပါ။
– အများကြီး မစားပဲ နည်းနည်းနဲ့ ခဏခဏ စားပါ
– ဘယ်လိုမှ ကိုမရဘူး နည်းနည်းဝင်တာနဲ့ကို ပျို့လာတယ်၊ အန်ပါတယ် ဆိုတဲ့ သူများကတော့ (Motilium M (သို့မဟုတ်) Maxalon ဆိုတဲ့ဆေးကို မနက်စာ၊နေ့လည်စာ၊ ညစာ မစားမီ မိနစ် (၃၀) ကြိုသောက်ပါ။
👌 အရသာမရတာဟာ လျှာပေါ်မှာရှိတဲ့ အရသာခံတဲ့ အဖုလေးတွေ ခေတ္တခဏ အလုပ်မလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပြီး သူ့အလိုလိုပြန်ကောင်းပါတယ် #အရသာမရဘူး (ပွင့်ထွက်သွားအောင် ဆိုပြီး) အရသာပြင်းလွန်းတဲ့ ချဉ်လွန်း စပ်လွန်း ပူလွန်းတဲ့ အစားများ ကို မစားကြပါနှင့်
တကယ်ပွင့်ထွက်သွားမှာက အစာအိမ်ပါ 😰 ပါးစပ်ကသာ အရသာမရတာ စားတဲ့ဟာတွေရဲ့ ဒဏ်ကို ကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းတဲ့အစာအိမ်က ခံရပြီး အစာအိမ်ပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်
6. ခေါင်းကိုက်တယ် ၊ (7) ဘာလုပ်လုပ် အာရုံမလာဘူး (စိတ်မဝင်စားဘူး) ၊ (8)စိတ်ဖိစီးမှုများတယ်၊ ကြောက်တယ် လန့်နေတတ်တယ်၊ (9) ည အိပ်မပျော်ဘူး
ကျန်တဲ့ အချက်တွေကတော့ စိတ်နဲ့ပဲ ဆိုင်တာပါ။
ကျွန်တော် စာတစ်ပုဒ်ရေးဖူးပါတယ် (Pandemic stress reactions ) ကပ်ရောဂါကို အကြောက်ကြီးကြောက်နေရာက ကိုယ့်မှာဖြစ်လိုက်ရတဲ့ အခါ အကြောက်ကြီးကြောက်သွားတဲ့အတွက်
👉 ပြန်ဖြစ်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲ
👉 ငါ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရော ဘယ်လောက်ပျက်စီးသွားပြီလဲ
👉 အပေါ်က ပြောခဲ့တဲ့ လက္ခဏာတွေခံစားရတော့တကယ်ပြန်ကောင်းတာရောဟုတ်ရဲ့လားစတဲ့ အတွေးတွေနဲ့က ညအိပ်မပျော်ပဲ အထက်ပါ (6,7,8,9) ကို ခံစားကြရပါတယ်။
– အဆိုးဆုံးအခြေအနေကို ကျော်ဖြတ်ပြီးပြီ ကောင်းလာမှာပါ
– ချက်ချင်းကြီး မကောင်းနိုင်ပေမယ့် တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်
– Post-covid မှာ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေဖတ်ပြီး စိုးရိမ်မနေပါနဲ့ (ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပါ 👉 နားနားနေနေ နေ၊ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်၊ အစားဝင်အောင်စား၊ အိပ်ပျော်အောင်အိပ်
– ဖြစ်နိုင်တယ် ဒါပေမယ့် ရှားတယ်လေ (တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ တစ်ယောက်လောက်တွေ့လည်း) ဆောင်းပါးရေးတော့ (လူကိုခွေးက ကိုက်တာ သတင်းမဟုတ်ပေမယ့် ခွေးကိုလူကသွားကိုက်တာရေးတော့) နာမည်ကြီးတာပေါ့
– အိပ်ပျော်ရင် အားလုံးသက်သာလာပါလိမ့်မယ်
– ဘယ်လိုမှ အိပ်မရရင်တော့ Melatonin 3mg သောက်အိပ်ပါ။ (Melatonin နဲ့မရရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးပြီး စိတ်ငြိမ်ဆေးသာသောက်ပါ)
သက်ရှည်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာကြပါစေ #ရောဂါအန္တာရယ်အပေါင်းမှာ့ကင်းဝေးကြပါစေ credit~Dr.phone si thu lwin
Previous post China ကို မွနျမာတို့က တရုတျ ဟု ချေါရသညျ့ အကွောငျးအရငျး
Next post ကာမပိုငျ ရှိသူနဲ့ ဖောကျပွားလြှငျ ကွုံရမညျ့ ငရဲ